नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो डिपीआरका लागि अघि बढ्यो लगानी बोर्ड
अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरको म्याद फेरि ६ महिना थप
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । लगानी बोर्डले नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआरका लागि आशय पत्र माग्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
लगानी बोर्डले उपत्यकाका दुई रुटमा चल्ने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।
रुट नं. १ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–फास्ट ट्याक स्टेसन खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) र डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा रेल विभागलाई दिएको छ भने रुट नं. २ अन्तर्गत नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डको डिपिआर भने लगानी बोर्ड आफैँले गर्ने भएको छ ।
बोर्डअनुसार नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डसम्मको लम्बाइ ४५ किमि छ । सो खण्ड निर्माण गर्न झन्डै एक खर्ब २९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैठकले अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरको म्याद फेरि ६ महिना थप गरेको छ । आयोजनाको प्रगति राम्रो भएकाले म्याद थप गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यसका साथै अनुगमन समिति बनाउने निर्णय लगानी बोर्डले गरेको छ ।